Njem Nleta - Ntughari Ntugharị | Njem zuru oke (Peeji nke 2)
Mostlọ 5 a ma ama na United States
Washington bu ulo nke 5 nke ulo ama ama na United States nke putara na otutu fim. You chọrọ ịma ihe ha bụ?
Rickshaw, ụgbọ njem ọdịnala ndị China
Na mba ndịda South na East Asia, site na India ruo China, ụzọ njem ọdịnala a na-akpọ rickshaw bụ ihe ama ama. Ebee ka i si?
Mmanụ a Honụ na-aga ebe ke United States
Mmanụ a Sixụ nke nwanyị isii na-aga na America - Wondị Dị Ebube. Site na anwụ na-acha Florida na Hispanic California.
Mpaghara ihe omimi nke Tierradentro, na Cauca
Otu n'ime akụ dị ukwuu nke mmepe-mbụ nke Columbian dị na Colombia dị na Tierradentro National Archaeological Park.
Aeroflot nwere iwu ọhụrụ maka ibu
Mụta maka iwu akpa Aeroflot ọhụrụ, ozi dị oke mkpa mgbe ị na-ebufe ụgbọ elu gị na ị na-eme atụmatụ njem gị.
Ihe ncheta akụkọ ihe mere eme kachasị mkpa nke Russia
Ihe ncheta kachasị mkpa nke Russia, nke bụkwa ụfọdụ n'ime ebe nlegharị anya nleta na mba ahụ.
Gịnị mere ị ga-eji gaa Rom
Ejegharị ejegharị na-Rome bụ otu nke kasị mma ihe na-eme dị ka nke a bụ otu nke kasị mma obodo na Europe.
5lọ ahịa XNUMX a ma ama na New York
Ọ bụrụ n’ịga New York, ị nwere ike ịjụ ma ị ga-eweta akpa akwa efu maka ịzụrụ ihe gị.
Bernini si Colonnade na Vatican
Ogige nke Bernini na Vatican bụ otu n’ime ihe ịtụnanya nke European Baroque. Ọ na-egosipụta nnabata nnabata ndị pilgrim.
Ebe nlegharị anya nke 10 kacha elu na Ireland
N'elu ebe nlegharị anya iri nke iri na Ireland bụ ebe dị ka nnukwu ụzọ, mgbanaka nke Kerry ma ọ bụ Dublin n'onwe ya.
The Bridge of Lovers, nke sonyere n'àgwàetiti ndị dị na Providencia na Santa Catalina, bụ ebe kachasị mma iji nwee ọ enjoyụ dị ka di na nwunye.
Maapụ nke Barcelona iji nwee ọ theụ na obodo ahụ. Maapụ site na agbata obi, distrikti, obodo ukwu, eserese ụgbọ ala ndị njem nleta, bikezọ igwe kwụ otu ebe Barcelona, ​​maapụ ama ...
Isi mmalite nke La Candelaria, agbata obi akụkọ ihe mere eme nke Bogotá
Mara mma dị ka ebe ole na ole ndị ọzọ, okporo ụzọ ya ndị dị warara na ihe ochie ochie na-akpọ gị òkù ka ị gaa njem nlegharị anya dị ụtọ iji chọpụta akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ.
Obodo ndịda ndịda Peru
Obodo ndịda ndịda Peru dịka Arequipa, Tacna ma ọ bụ Puno na-enye gị nnukwu ihe nketa na oke ala mara mma.
Madagascar na-enye gị ala ndị yiri nrọ na oke osimiri dị egwu, mana nri dị ụtọ ma na-anabata agwa ndị Africa.
Osimiri kacha mma na Asturias, si Oviedo
Anyị na-egosi gị oke osimiri kachasị mma na Asturias ị nwere ike ịnweta ma ọ bụrụ na ị na-eleta isi obodo nke ndị isi, Oviedo.
Tocororo, nnụnụ mba nke Cuba
Tocororo abụghị naanị nnụnnụ: ọ bụ nnụnụ mba nke Cuba. Nke a pụtara na ọ bụ akụkụ nke akara mba nke mba a.
Typicalfọdụ na-ahụkarị onyinye si Vienna
Onwere onyinye onyinye Vienna ụfọdụ nke ndị njem niile na-azụ, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ndị kachasị ewu ewu. Ndị a bụ ndị mbụ ịzụrụ maka ndị enyi na ezinụlọ.
Ọgba nke elu
Want chọrọ ịmatakwu banyere Cueva de los Verdes na Lanzarote? Taa, anyị na-enye gị ozi ahụ niile ị na-eche. Ga-efu?
Gini mere eji akpo Havana otua
Choputa ihe kpatara eji akpo Havana otua na ihe oputara
Nka na Omenala ndi Canada
You mara na na Canada enwere ihe dịka puku ndị Aborọbịa 300 na-asụ asụsụ 58 ma ọ bụ olumba nke ndị otu asụsụ asụsụ iri ...
Omenala ekeresimesi na Brazil
Omenala ekeresimesi na Brazil sitere na njikọta nke ọdịbendị mejupụtara mba America ahụ. Site…
Ihe ị ga-ahụ na Sweden
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnụ ụtọ njem zuru oke, echefula ihe ị ga-ahụ na Sweden. N'ihi na anyị na-ewe gị site na ọnọdụ dị iche iche dị iche iche mana ọmarịcha ịma mma.
Obodo French Basque
Obodo French Basque bụ mpaghara juputara na akụkọ ihe mere eme na ihe ncheta. Ma, karịa ihe niile, ọmarịcha ọdịdị ala na ọmarịcha gastronomy.
Igwe mmiri ịsa ahụ na-ekpo ọkụ Budapest
Chọrọ ịma nke bụ isi iyi mmiri ọkụ Budapest kachasị ama na mpaghara ahụ? Lee, anyị họọrọ ebe ndị ahụ ị na-eche.
Ihe ị ga-ahụ na Lyon
Chọrọ ịma ihe ị ga-ahụ na Lyon? Echefula njem a, site na otu n'ime ebe kachasị mma na ebe nketa.
Ihe ị ga-ahụ na Andorra
Want chọrọ ịma ihe ị ga-ahụ na Andorra? Echefula ihe ndị anyị kwurula banyere ya. Architecture, akụkọ ihe mere eme na panoramic echiche.
Cinque Terre: Mmadụ Bịa ka ndị kasị yi ebe ke Italy
Agba ndị ahụ, ikuku mmiri na omenala mejupụtara obodo ise nke Cinque Terre, paradaịs nke na-ele anya n'ụsọ ugwu nke Italy.
Grottoes nke San José
San José abaitiat bụ otu n'ime ihe ngosi dị ukwuu anyị nwere na mba anyị. A ụgbọ mmiri njem na-ekpori ndụ ụlọ na ị ga-mara.
Ihe ị ga-ahụ na Milan n'otu ụbọchị
Enwere ụfọdụ ebe ị ga-ahụ na Milan n'otu ụbọchị ma anyị ga-agwa gị ha. Unike ebe mara mma nke ukwuu na-agaghị echefu.
Ebe aga-ebi ihe ịtụnanya Christmas
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịnọfu ekeresimesi dị ịtụnanya na nke dị iche iche, ebe ndị a kachasị mma bụrụ ezigbo nhọrọ iji gbanahụ nri abalị ezinụlọ.
Sozọ a na-akpọ Cistercian Route bụ njem dị ogologo nke na-ewetara anyị nso na ebe ndị pụrụ iche, ebe ije na-ezute gastronomy na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndi Balkan: Ihe ihu n’otu n’ime ebe amaghi n’uwa
Ogige ntụrụndụ mba, obodo akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ọdọ mmiri mmiri. Site na Slovenia ruo Gris, enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na Balkan Peninsula.
Si arches nke ochie obodo nke Bern na mgbidi nke Avila, ndị a kasị mma mma ochie obodo na Europe ga-eme ka ị na-eme njem na oge na ohere.
Spas kacha mma na Spain
Ọ bụrụ na ị na-achọ izuike na ngwụsị izu na-abịa, gbanahụ spa ndị a kachasị mma na Spain ebe nkasi obi site na ahụike ka mma.
Isla de Lobos: Ihe ị ga-ahụ na obere paradaịs a na Canary Islands
Ọ bụrụ na ị na-achọ paradaịs n’elu ụwa, Isla de Lobos nke dị nso na Fuerteventura, na Canary Islands, na-ekwe nkwa osimiri nzuzo na ụzọ ụkwụ njem pụrụ iche.
Ihe ị ga-ahụ ma mee na ụlọ elu Montparnasse dị na Paris
Ọ bụrụ n’ị na-achọ atụmatụ ọzọ na Paris, egbula oge ịgakwuru ụlọ elu Montparnasse wee nweta echiche kacha mma nke Obodo Lovehụnanya.
Ihe ncheta nke Madrid nke ị na-agaghị echefu
Site na Onye isi ala Plaza ruo Templelọ nsọ nke Debod, ihe ncheta ndị a nke Madrid nke ị na-agaghị echefu bụ ndị kachasị mma na isi obodo Spanish.
Akụkọ mgbe ochie biri na Caves nke Zugarramurdi, nke akpọrọ Cuevas de las Brujas. A ije site na anwansi ebe ị ga-achọpụta.
Ihe ịhụ na New York: ebe kachasị mma na obodo anaghị ehi ụra
Ihe akpụrụ akpụ nke nnwere onwe, Brooklyn ma ọ bụ akara ngosi Times Square bụ ụfọdụ n'ime ihe ga-ahụ ebe dị na New York. You chọrọ karịa?
Ebe maka izu ụka ngwụsị izu
Ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị 2 ma ọ bụ 3 iji kwụpụ ma chọpụta ebe ọhụụ, ebe ndị a maka izu ụka na-eme ka ọ dịrị gị mfe.
8 egwu nke ụwa
Egwuregwu 8 ndị a nke ụwa ọ bụghị naanị na-akpọ gị òkù ka ị gbaa egwu, kamakwa iji ghọta nke ọma mmetụta na ọdịbendị nke akụkụ dị iche iche nke ụwa.
Anyị nwere azịza kachasị mma maka ajụjụ banyere ihe a ga-eme na Benidorm. Maka na ọ bụ ebe nwere ọtụtụ nkuku iji hụ ma rụọ ọrụ iji rụọ ya.
Ihe ị ga-ahụ na Sardinia
Mgbe anyị chere echiche banyere ihe anyị ga-ahụ na Sardinia, ọtụtụ ihe pụrụ iche na ọmarịcha ebe na-abata n'uche. Taa, anyị na-enyocha ha niile.
Ọdọ Mmiri: Fairytale Croatia
Mmiri mmiri mmiri, ugwu na oke mmiri ma ọ bụ ọdọ mmiri mmiri na-eme ọmarịcha Plitvice Lakes National Park na Croatia. Echefula ya
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na obodo Rocío, anyị nwere azịza kacha mma. Eme na ebe obi uto.
Setenil de las Bodegas: nkà nke ịkpụcha okwute
Ewere otu n'ime obodo ndị kachasị nwee mmasị ịmata na Andalusia, Setenil de las Bodegas na-akpọ gị òkù ije dị ụtọ n'etiti ụlọ ndị a wapụtara n'ime okwute n'onwe ya.
Alakụba ndị na-ewu ewu, mpaghara ego ọdịnihu ma ọ bụ agbata obi nke akụkọ ihe mere eme dere bụ isi obodo Middle East ndị ị na-agaghị echefu.
Anyị na-ele anya osimiri kachasị mma n'ụwa iji gbanahụ ụwa n'etiti mmiri turquoise, aja ọcha na ọtụtụ narị nkwụ
7 Ihe-ebube di n'uwa a
Ihe omimi 7 nke uwa nke oge a na-emikpu anyị na ihe nketa nke jupụtara n'akụkọ ihe mere eme na ihe nzuzo sitere na China ruo ebe dị elu nke Peru.
Ihe ncheta kachasị mkpa n’ụwa
Site na Japan ruo Granada, anyị na-emikpu onwe anyị n'ime ihe ncheta kachasị mkpa n'ụwa iji gbaa gị ume ịmalite njem kachasị.
Barrio de Santa Cruz na Seville: otu esi enweta ebe ahụ, ihe ị ga-ahụ
Ebe Santa Cruz dị na Seville bụ ebe nzuzo nke ihe nzuzo, agba na duende n'obi nke isi obodo Andalus.
Hapụ onwe gị n'obodo ndị a kachasị mma na Sierra de Aracena pụtara ịbanye n'ógbè Huelva ebe ham, anwansi na obi iru ala dị.
Site na amara nke obodo nta ya ndị ọcha ruo na isi mmiri nke Sierra de Grazalema Natural Park, enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na Sierra de Cádiz.
Ihe ị ga-ahụ na Jerez de la Frontera
Anyị na-emikpu onwe anyị n'otu n'ime obodo kachasị na-enwu gbaa na Andalusia iji chọpụta ihe niile dị na Jerez de la Frontera.
Ebe kachasị mma ịga
Obodo nke ịkwụ ụgwọ 4000 ma ọ bụ agwaetiti kachasị amasị Marco Polo bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịga leta na 2019
Omenala ndị Japan: ịmata ihe 8 nke ịmaghị
Ihe omuma ndi a nke 8 nke ndi Japan na-agabiga na gastronomy, nke ime mmuo ma obu ndi mmadu nke obodo di iche ma di egwu.
Paris na ụbọchị 3: ihe ịhụ na ihe ị ga-eme
Site na ifflọ Eiffel ruo Palaces nke Versailles, anyị na-agagharị Paris na ụbọchị 3 site na mpaghara dị iche iche na ụzọ mara mma.
Alalọ Kuala Lumpur Petronas: Site na Elu nke Malaysia
Thelọ Petronas na Kuala Lumpur abụghị naanị otu nnukwu akara ngosi nke Malaysia mana mmeri Asia nke ọdịbendị na ihe ọhụrụ na-akwado.
Site na nnọkọ spa ka ị furu efu na obodo ndị mara mma, atụmatụ ndị a maka izu ụka dị ka di na nwunye ga-emeri gị. You mere ha niile?
N'ịbụ ndị akụkọ ifo na ihe omimi juputara na Mad King's Castle na Germany bụ ihe mmụọ nsọ maka ihe nkiri Disney na-ehi ụra Mma.
Ihe ị ga-ahụ na Ronda: akụkọ ifo, duende na epic bridges
Site na Old Bridge mara mma ruo n'akụkụ ya nke amara Moorish, enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na Ronda, otu n'ime obodo kachasị mma na Spain.
Obodo kacha mma mara mma na Spain
Site na ịdị ebube nke Seville ruo na mbara igwe nke Barcelona, ​​obodo ndị a kachasị mma na Spain na-akwado ọtụtụ ọdịiche nke mba anyị.
Obodo mara mma na Alicante nke ị ga-aga
Site n’oké nkume ruo ịrị otu narị nke nnụnụ mmiri ruo na nnukwu ụlọ nke oge ọzọ, obodo ndị a mara mma na Alicante jupụtara na amara na ihe nzuzo. You maara ha?
Gagharị ụlọ Anne Frank na Amsterdam
Franklọ Anne Frank abụghị naanị otu n'ime ebe nlegharị anya nke Amsterdam, mana ngosipụta nke otu akụkụ kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme.
Agwaetiti Canary gosipụtara blanket nke nhọrọ na ebe nkiri na-achọta na Tenerife ebe kachasị mma ị ga-anụ ụtọ ha niile. Site na igwu mmiri na nrọ osimiri ịrị elu kachasị elu na Spain, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na Tenerife na ọnwa ndị na-abịanụ.
Miss gaghị agbaghara ihe ndị kasị ihe atụ nkuku na ị pụrụ ịnụ ụtọ na Berlin na 3 ụbọchị. Ndị agbata obi, ihe ncheta na ọtụtụ ndị ọzọ na nleta elekere 72.
N'ime obodo ndị kachasị mma na Spain, anyị na-aga n'okporo ámá ọcha na Teguise iji gwụ n'etiti ahịhịa na Plaza Mayor de Chinchón.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ebe ịga njem na Nọvemba, anyị ga-ahapụrụ gị ebe kachasị mma ị nwere ike ịnụ ụtọ n’ime ọnwa ahụ. Unique nkuku jupụtara amara
Bran Castle ma ọ bụ Dracula's Castle bụ otu n'ime iwu dị mkpa na Romania. Ebe nwere ọtụtụ amara na akụkọ ifo n'azụ ya.
Obodo ochie, dị ka a maraworị, nke ahụ bụ mkpọmkpọ ebe. Mana n'agbanyeghị na ọ dị otu a, Belchite nwere ọtụtụ ihe igosi anyị. Ọ nwere akụkọ ihe mere eme dị ukwuu n’azụ ya ma taa ọ bụkwa otu n’ime ebe ndị a kacha eleta. You maghị ya?
Agwaetiti Lofoten nwere ọtụtụ akụkụ ị ga-eleta. Ọ bụghị naanị maka obodo anyị ga-ezute n'oge ọ bụla. Mana maka omume nke omume anyị nwere ike ịme. Na-echezọ ọkụ ugwu iji nwee ọ enjoyụ.
Utezọ nke White Villages
Routezọ nke obodo ndị ọcha bụ otu n'ime nnukwu ebe ndị njem nleta na mpaghara Cádiz nwere. A ije site na obodo ndị sook gị na akụkọ ihe mere eme ha, ọdịbendị na, n'ezie, ha mara mma. Gaghị echefu onye ọ bụla n'ime ha n'ihi na ha niile dị mkpa n'okporo ụzọ a!
Nleta nleta na Camden Town bu ihe kariri ihe aghaghi agha agha. Agbata obi dị iche ebe egwu, ahịa na nhọrọ ndị ọzọ gbakọtara. Ihe a niile na-adọta ọtụtụ puku ndị njem nleta na ngwụsị izu ọ bụla. Ọ bụghị n'ihi na obere!
Gothic Nkeji nke Barcelona
Enwere ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke anyị nwere ike ịga leta mgbe anyị na-ekwu maka Gothic Quarter nke Barcelona. Taa, anyị na-ewetara gị ha ka ha ghara ịgbanahụ gị.
Nduzi ndi njem ndi Barcelona
Ntuziaka kacha mma na Barcelona. Tinye ebe a wee budata ntuziaka Barcelona anyị zuru ezu na PDF. Yabụ ị nwere ike ibipụta ntuziaka Barcelona ma chọpụta obodo ahụ na-enweghị ihe ọ bụla funahụrụ gị na oge nchekwa. Ihe ncheta na ebe niile ịgaghị echefu ma ọ bụrụ na ị bụ onye njem na Barcelona, ​​otu n'ime ndị a kacha eleta n'ụwa.
Hotels Cordoba na-akwado Uche Afọ Ọhụrụ
Hotelslọ nkwari akụ ndị dị elu na isi obodo Cordovan na-akwadebe ememme Afọ Ọhụrụ na usoro nke ...
Agbata na akwa mmiri nke Elche
Elche taa nwere ọtụtụ agbata obi, ọhụụ na ọdịnala, ma ọ bụ karịa buru ibu, mana onye ọ bụla n'ime ha nwere ya ...
Akwukwo nri na Guadalajara
Gburugburu ala nke mpaghara Guadalajara dị iche iche dị iche iche n'okirikiri ala, ihe sitere na ...
Anise na-apụta, Elche ngwaahịa
A nnọọ omenala uzommeputa si Elche na Levante ebe bụ nke Anis apụta, nke ...
Akpụkpọ ụkwụ ice na Elche
Akpụkpọ mmiri bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị nke obodo Elche na-eweta. Egwu dị na ...
Anụmanụ na ahịhịa na Cuenca
Ahịhịa Cuenca bụ otu n'ime ihe ùgwù kachasị nwee ike ịchọta na mpaghara ahụ, ebe ọ bụ na ...
Ihe ị ga-ahụ na London
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị ga-ahụ na London, echefula ntuziaka a na nleta 17 dị mkpa na obodo nwere oke amara. You maara ha niile?
Ogige Uhie nke Russia
Chọpụta isi ebe ị ga - enwe ike ịhụ na Red Square nke Russia. Mpaghara juputara na ebe ngosi ihe mgbe ochie, katidral na obuna ebe ahia.
Omenala na ememme nke Canada
Anyị na-agwa gị ihe bụ ọdịnala nke Canada yana kedu ememme ndị Canada kachasị eme na nke ọtụtụ puku mmadụ na-aga kwa afọ. You maara ha?
Ndị agha Terracotta, nnukwu ihe nzuzo ikpeazụ nke China
Onu ogugu 8 nke na-eme ka onu ogugu ndi Terracotta Warriors na China na-aga n'ihu bu otu n’ime ihe omimi di omimi nke oke owuwa anyanwu.
5 akwa mgbago ụlọ gburugburu ụwa
Stalọ elu 5 ndị ​​a nwere agba gburugburu ụwa na-akwado ikike nke ọrụ obodo mepere emepe n'obodo ndị dị ka Seoul ma ọ bụ San Francisco.
Ihe ị ga-ahụ na Bern, isi obodo Switzerland
Lọ elu akụkọ mgbe ochie, ubi nrọ na bea mejuputara ọmarịcha obodo ochie nke Bern, isi obodo Switzerland.
Greenhouse, ụlọ Denmark nke mbụ 100% ụlọ
Greenhouse Greenhouse nke Denmark, nke emepere na 2009 na Copenhagen, bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke ụlọ na-adigide na ụwa.
Ala mpaghara nke Colombia
Chọpụta mpaghara ala nke Colombia, ole ka ị nwere? Anyị na-agwa gị njirimara na njirimara nke onye ọ bụla n'ime ha.
Anyị na-akọwa amara nke agwaetiti ndị dị na Colombia: San Andrés, agwaetiti Rosario, San Andrés na Providencia na agwaetiti ndị ọzọ dị na Colombia.
Ndị a bụ ebe kachasị mma iji nụ ụtọ njem nlegharị anya n'Australia. You gaghị echefu oke ihe mgbochi akwa ma ọ bụ Tasmania dị egwu!
Ugwu Northern na Norway, ihe ngosi nke agba
Sighting Northern Northern na Norway na-atọ ụtọ maka ndị na-agba mbọ gafee Arctic Circle nke gbawara na agba.
Na-agagharị na Asilah, n'ụsọ oké osimiri dị n'ebe ugwu nke Morocco
Asilah bụ obere obodo dị na mgbago mgbago ugwu nke Morocco ama ama maka ikuku iru ala ya, mgbidi ya na ihu-acha anụnụ anụnụ na ọcha nke Medina.
Uwe Cuban, uwe na Cuba
Chọpụta ụdị ejiji Cuban na-ahụkarị maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na oge dị iche iche n'afọ. Kedu uwe ndị Cuba nke ndị Cuba na-eyi n'ụbọchị ha kwa ụbọchị?
Cuevas del Soplao, ihe ịtụnanya dị na Cantabria
Ihe a na-akpọ Cuevas del Soplao bụ ihe ịtụnanya okike. Anyị na-agwa gị otu esi aga ebe ahụ, ọnụahịa, oge, ụzọ ndị dị nso na ndị ọzọ!
Amsterdam's Light Light District na-emegharị ajọ mbunobi ochie site na ịnye mpaghara atọ ụtọ pụrụ iche, ụlọ ahịa kọfị na nka.
Gini bu ugwu? Anyị na-enyocha isi ugwu ugwu nke Colombia na akụkụ ya kachasị mkpa. You maara ha niile?
Ejuru mmiri ozuzo na akụkọ mgbe ochie, Angel Falls, na Venezuela, ka bụ ihe a na-apụghị imeri emeri dị ka sọsọ mmiri kachasị elu n'ụwa.
Ebe 8 dị na Caribbean ka ị kwesịrị ịma
Ebe 8 ndị a na Caribbean ị kwesịrị ịma abụghị naanị gụnyere osimiri, kamakwa ụlọ ndị a ma ama, obodo ndị colonial na ogige ntụrụndụ ndị a na-akọkarị.
Ihe ị ga-ahụ na Almuñécar, na Tropical Coast nke Granada
Dabere na Costa Tropical nke Granada, Almuñécar bụ ebe bụ ngwakọta zuru oke nke ụsọ osimiri, ọdịdị na oge ezumike.
Youchọrọ ịmatakwu banyere ịchịisi na akụkọ ihe mere eme nke Venezuela? Echefula isiokwu a ebe anyị na-ekpughe ihe nzuzo niile nke Venezuela
Na-ejegharị n'ụgbọ okporo ígwè na India
Travelga ụgbọ okporo ígwè na India bụ ahụmịhe chọrọ ndụmọdụ ụfọdụ, anya mepere emepe, ma karịa, ikike ịhapụ onwe gị.
Ihe ị ga-ahụ na Cuba n'ime izu abụọ
Site n'okporo ámá ifo nke Old Havana ruo na agba nke Trinidad, ndụmọdụ ndị a ịmara ihe ị ga-ahụ na Cuba n'ime izu abụọ ga-abụ ezigbo enyemaka.
Atụmatụ 7 n'èzí na Barcelona
Atụmatụ ndị a dị n'èzí 7 dị na Barcelona gụnyere ihe niile site na isi iyi agba ruo na nnọkọ sinima n'èzí gaa na ndị ochie dịka Parc Güell.
Ndụmọdụ 25 maka ịga Cuba
Atụmatụ 25 a maka ịgagharị na Cuba ga-enyere gị aka ịchọta ma nwee ọ whatụ otu n'ime agwaetiti kachasị mma na Caribbean.
Ndụmọdụ 15 maka ịga India
Site na oge njem kachasị mma na ekele ekele, ndụmọdụ 15 a maka ịga India ga-enyere gị aka ịhazi ahụmịhe gị nke ọma.
Okpukpe na Morocco
Anyị na-ewetara gị ihe nzuzo niile nke okpukpe na Morocco: akụkọ ihe mere eme, ọdịnala, ofufe na echiche nke mba na-agbaso ọdịnala ndị Alakụba
Souks nke Marrakech: agba, aromas na haggling
Aromas, agba ma ọ bụ haggling na-ezukọta na souks dị iche iche nke Marrakech ileta n'oge ọ bụla ị gara obodo Moroccan a ma ama.
Ebe 15 kachasị mma n'ụwa
Ebe 15 ndị ​​a kachasị mma n'ụwa na-atụgharị ahụmịhe njem na egwurugwu nke positivity, ọdịbendị na njikọta.
Essaouira: obodo na-acha anụnụ anụnụ na ọcha nke Morocco
Essaouira, n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic nke Morocco, bụ paradaịs na-acha anụnụ anụnụ ma na-acha ọcha jupụtara na akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị, nka na azụ mmiri.
Tarragona: akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị na Mediterranean
Obodo Tarragona na-eweta ụfọdụ ihe ịtụnanya dị nka, omenaala na akụkọ ihe mere eme na mba anyị.
Datesbọchị dị mkpa na ezumike na Morocco
Chọrọ ịma nkọwa niile nke ememme ndị kachasị mkpa na Morocco? Anyị na-egosi gị ememme ndị bụ isi na Moroccan na ụbọchị
Ọ bụrụ na ị ga-aga obodo dị iche iche nke Canada, soro ntuziaka a iji chọpụta mgbe ihu igwe kachasị mma na mba a na nke kachasị oyi n'oge afọ.
Ọ bụrụ n ’ị ga-aga ileta Morocco, echefula onye ndu anyị ka ị gaa ileta obodo iri kachasị mma na Morocco, dị ka Ifrane, Fes ma ọ bụ Marrakech
Afro-Caribbean nri si Costa Rica
Chọpụta ụdị nri Costa Rica na ụfọdụ nri Afro-Caribbean dị ka rondón, gallo pinto ma ọ bụ casado n'etiti ndị ọzọ.
Ihe ị ga-ahụ na Dominica, Caribbean nke ọdịnihu
Mmiri iyi mmiri, obodo ịkụ azụ na ugwu mgbawa na-agbakọta na agwaetiti Dominica, Caribbean nke ọdịnihu, ecotourist na nzuzo.
Ọdịda anyanwụ kachasị mma n'ụwa
Anyanwụ ndị a kachasị mma n'ụwa na-echetara anyị mkpa ọ dị ịga njem na ịghọkwu ihe na-echebara echiche.
Obodo 8 mara mma nke Latin America
Obodo 8 a mara mma na Latin America nwere ụka dị iche iche na-acha odo odo, ụlọ ndị a tụrụ atụ na nnọkọ psychedelic jupụtara na ike na akụkọ ihe mere eme.
Oge kacha mma iji gaa Norway
Ọ bụrụ n’ị na-eme atụmatụ ịga Norway, echefula onye ndu anyị iji chọpụta ọnwa kachasị mma iji nwee ọmarịcha ebe a
Ahụkarị Swedish efere
You maara na na Sweden na ị naghị eri nri salmọn na meatballs? Anyị na-egosi gị ihe nzuzo niile nke gastronomy ya, ya na nri ndị Sweden kachasị dị na mba ahụ
Ihe na-akpali mmasị banyere Portugal
Ọ bụrụ na ị ga-aga leta Portugal, echefula onye ndu anyị iji mee ka ezumike gị kachasị na paradaịs a
Ihe ị ga-ahụ ma mee na Portugal
Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịhụ ma mee na Portugal, anyị na-egosi gị ebe kachasị mkpa ị na-agaghị echefu na njem gị
Uwe ejiji Dutch
N'etiti uwe ọdịnala Dutch, clogs ha a ma ama pụtara, ma anyị na-egosi gị uwe ọdịnala niile nke Dutch
Remedios na Cayo Santa María, ọdịbendị na osimiri ndị dị na Cuba
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịga Cuba ahụ a ga-achọpụtabeghị ya, ị gaghị echefu ohere ileta Remedios na Cayo Santa María, na mgbago ugwu agwaetiti ahụ.
Salar de Uyuni ma ọ bụ Machu Picchu bụ ụfọdụ n'ime ebe iri ndị a na South America nke ị ga-ahụ otu ugboro na ndụ gị.
Kenitra, Morocco na ndụ abalị
Ọ bụrụ na ị ga-aga Kenitra, echefula ndụmọdụ anyị ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ohere nke obodo a na Morocco
Atụmatụ 9 maka mmekọrịta gị na ndị obodo mgbe ị na-eme njem
Atụmatụ 9 a maka iso ndị obodo na-emekọrịta ihe mgbe ị na-eme njem ga-enye gị ohere ịmegharị njem ọhụrụ ahụ n'akụkụ niile.
Rịba mma na Oregon
Oregon na-enye ọmarịcha ụdị ọdịdị dị egwu nke ndị njem nleta ọ bụla ga-eleta opekata mpe otu oge na ndụ ha.
8 Caribbean osimiri ị ga-agarịrị
Mexico, Cuba ma ọ bụ Barbuda a na-amaghị ama bụ ụfọdụ n'ime agwaetiti ebe ndị a osimiri 8 Caribbean ndị ọzọ dị na ị ga-agarịrị.
Ihe 9 ị ga - eme na Havana
Iri nri dessers dị ụtọ, ileta Malecón ma ọ bụ furu efu na nzuzo, bụ ụfọdụ n'ime ihe 9 na-esonụ ị ga-eme na Havana.
Ga Taj Mahal na India
Ọ bụ Emperor Shah Jahan wuru Taj Mahal, ihe ncheta kachasị ebube na India, iji kwanyere nwunye ya nwụrụ anwụ, Mumtaz Mahal, na 1632.
Otu esi ejikọ Internetntanetị na Cuba
Mara otu esi ejikọ Internetntanetị na Cuba ga-abụ nnukwu enyemaka na-atụle njikọ dị ala nke agwaetiti Caribbean nwere.
Ndụmọdụ maka njem na Cuba
Ndụmọdụ ndị a maka njem gaa Cuba sitere na ebe obibi ka esi emekọrịta mmekọrịta na ndị obodo Cuban na-ekpo ọkụ ma na-enye aka.
Ihe ọchị banyere Holland
You maara na Amsterdam nwere ebe ngosi ihe mgbe ochie kachasị elu n'ụwa? nke a na ihe omuma karia banyere Holland nke gha ju gi anya
Trevi Fountain, kasị mma isi iyi na Italy
Mweghachi na-adịbeghị anya nke Trevi Fountain ghọrọ ihe mere ị ga-eji gaa Rome ọzọ afọ a.
Dutchgba egwu ọdịnala Dutch
Anyị na-ewetara gị mkpokọta na agba egwu ọdịnala kachasị nke Holland, ka ị wee mara ihe nzuzo ha na ọdịnala ha.
Omenala na ọdịnala nke ọha obodo Norway
Ndi ama ọfiọk ke n̄kaowo Norway ẹda ubon nte ata akpan n̄kpọ? anyị na-egosi gị omenala na ọdịnala niile nke ndị Norway
Italy na obodo 10 kachasị mkpa
Ndị a bụ obodo 10 kachasị mkpa na :tali: Rome, Milan, Florence, Venice na obodo ndị ọzọ na-anọchite anya obodo pasta a ma ama.
Ebe kachasị mma ibi na Granada
Granada bụ otu n’ime obodo ndị kachasị mma na Andalusia ma na-anabata ọtụtụ ndị njem nleta kwa afọ. Okporo ụzọ ya ...
Ọnọdụ 10 n'ụwa ị ga-ahụrịrị tupu ị nwụọ
Nnukwu mgbidi ma ọ bụ nnukwu kaniyon bụ abụọ n'ime ebe 10 na-esote ụwa ị ga-ahụrịrị tupu ị nwụọ.
Ndụmọdụ maka ịgagharị na Morocco
Ndụmọdụ ndị a maka ịgagharị na Morocco gụnyere ndụmọdụ bara uru ga-enyere gị aka ịnụ ụtọ anwansi na ịma mma nke obodo Maghreb.
Omenala na omenaala bekee
O bu na imaghi ihe bu omenala na ndi bekee? Anyị na-akụziri gị ihe ndị kasị mkpa ọzọ, akụkọ ihe mere eme nke 5:00 tii ...
Ndụmọdụ maka ụbọchị mbụ na ebe ọhụụ
Ụ mmiri mmiri, ịnyefe nnyefe ma ọ bụ ịhapụ onwe anyị bụ ụfọdụ n'ime ndụmọdụ ndị a maka ụbọchị mbụ na ebe ọhụụ.
Ebe kachasị mma n'ụwa na-eme ecotourism
Travelga njem na-eme ecotourism na Borneo, Amazon ma ọ bụ India na-aghọ ụzọ kachasị mma iji kwanyere ụdị ihe dị iche iche na ọdịbendị dị iche iche nke ụwa ùgwù.
Ezigbo Ihe Banyere England
England bụ otu n'ime mba anọ mejupụtara United Kingdom, nke kachasị n'ime ha, yana akụkọ ntolite ya, ...
Angel Falls ma ọ bụ Auyan-tepui bụ otu n'ime ebe kachasị adọrọ mmasị na Venezuela maka ịma mma ya, akụkọ ihe mere eme na ọnọdụ pụrụ iche n'ụwa
Oge kacha mma iji gaa Russia
Soro ndụmọdụ anyị iji mara mgbe kachasị mma ma ọ bụ oge nke afọ iji gaa Russia na ịnụ ụtọ njem gị n'ụzọ zuru ezu
Ebe 8 n’ime ụwa ebe emere Star Wars saga
Seville, Tunisia ma ọ bụ Maldives bụ ụfọdụ n'ime ụwa ebe a gbara saga Star Wars. Site na olile anya ohuru na Rogue One na nso nso a.
Omenala Caribbean na akụkọ ntolite ya
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ihe nzuzo niile nke akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị nke Caribbean, echefula ọkwa a ịmara ihe niile gbasara ọdịbendị Caribbean.
Ndepụta na nkọwa nke agbụrụ agbụrụ nke bi na Venezuela, yana usoro ha na ọdịbendị ha kọwara nke ọma.
Chọrọ ileta Castle Neuschwanstein, obí dị ka Cinderella? Ọ dị mma, soro ntuziaka a ebe anyị na-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma
Cartagena de Indias bu ebe ama ama di na Kolombian Caribbean. Na nke a, anyị na-agwa gị nke bụ osimiri kacha mma na Cartagena.
Ebe mmasị na .tali
Ebe nke mmasị ileta na njem na Italy. Iconic saịtị dị ka Rome, Sicily, Florence na ihe ị ga-ahụ na onye ọ bụla.
Tlọ obibi Taino
Chọpụta ụlọ Taíno nke Cuba na amara ha. Kedu akụkọ ihe mere eme n'azụ ụlọ Naturist ndị a? Bata ma chọpụta!
Osisi na osisi nke Gris
Choputa ahihia na anumanu nke Gris, obodo nke nnukwu ecoregons kewara abuo dika oke ohia Mediterenian na oke osisi di egwu.
Ihe nzuzo nzuzo nke Amsterdam ... na ọ dịghị onye maara
M na-atụ aro ka ị chọpụta akụkụ ụfọdụ nke Amsterdam nke dị n'èzí, ma ọ bụ ndị njem nleta anaghị eleta ya ... gaa n'ihu ma gwa anyị ihe ị chere.
Curiosities nke Egypt maka umuaka
Akụkọ ihe mere eme na curiosities of Egypt ịgwa ụmụaka. Ọ bụrụ na inwee ohere, soro ha gaa Egypt.
Echiche kachasị mma nke echiche dị na Switzerland
Nnukwu echiche nke okike site na ndagwurugwu ya na ugwu ya, nke anyị na-enye gị site na isi echiche Switzerland.
Nooks na Holland ị kwesịrị ịdebe ihe nzuzo
Ahọrọla m akụkụ anọ ka ọ bụrụ na oge izizi ị nọrọ na Holland ị gara, ị gaghị enwe ike ileghara ya anya na nleta nke abụọ gị ... ma ọ bụ nke atọ gị.
Obodo kacha mkpa na Filipinz
Taa, anyị raara onwe anyị nye iji mata obodo kachasị mkpa na Philippines.
Akụkọ ihe mere eme Quezon City
Quezon City bụ obodo kachasị ọnụ ọgụgụ na Philippines.
Mara 6 kasị mma ebe na Italy
Shouldtali kwesịrị ịdị ebighi ebi, agbanyeghị anyị mere nhọrọ bara uru ka ị mata 6 kacha mma ebe na Italy.
Ọ bụrụ na ị ga-aga Colombia, ị mara nke ọma omenala ndị Colombia na ọchịchọ ịmata ihe. Echefula omenala niile nke Colombia!
Kedu agwaetiti Greek kachasị mma iji soro ezinụlọ
Detuo nke bụ agwaetiti Grik kacha mma maka ezumike ezinụlọ ị na-agaghị echefu echefu!
Hapụ ma ọ bụ ịgaghị ekpu na Gris
Ọ bụrụ n’ịla ezumike gaa Gris, ị kwesịrị ịma ihe a niile gbasara ịtụ ahịa na Gris.
Ndụmọdụ na Ireland, ịhapụ ma ọ bụ ịhapụ
Na-aga Ireland? Ma ma ọ bụrụ na ị ga-ahapụ ego ma ọ bụ na ị gaghị ahapụ? Nke a bụ ebe na mgbe ikpu na Ireland.
Ntuziaka na Australia
Ikwesiri ikpu na Australia? Ee ma ọ bụ mba? Mgbe ole?
Rome ogige ntụrụndụ
Anyị na-akpọ gị òkù ileta ogige ntụrụndụ abụọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị kpebie iji oge ezumike gị n'isi obodo, na ụlọ nke ndị ezinụlọ gị ma ọ bụ ndị enyi gị.
Omenala na ọdịbendị nke mpaghara Amazon
Mkpokọta banyere nkọwa niile gbasara omenala na ọdịnala Amazon ka ị wee nwee ike ịnụ ụtọ njem gị site na Colombia Colombia na-eme nke ọma
Ihe ncheta okpukpe na ụka nke Atens
Narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX bụ mkpebi maka ọpụrụiche nke ndị Byzantium nke Atens. N'ime narị afọ abụọ a, ụka dị iche iche ...
Abụọ ndị ochie mara mma na Tuscany
Ọ bụrụ n’ị gaa Tuscany, gbaa mbọ hụ na ị gara leta ụlọ ochie atọ ndị ochie a. Will ga-ahụ ya n'anya!
Kedu ka Sistemụ Ahụ Ike na Portugal
Usoro ahụike Portugal dị iche na mba ndị ọzọ n'echiche na ebe a ị nwere ...
Ogwe maka ndị nwoke na nwanyị nwere mmasị nwanyị na Havana
Dee aha ụlọ mmanya abụọ a maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na Havana
Ndị kasị adọrọ adọrọ ọdọ mmiri Switzerland
N'etiti ihe niile dị ebube dị na Switzerland bụ ọdọ mmiri ndị nwere kpokọtara. Ọtụtụ na nnukwu, onye nke ọ bụla bụ ihe ịtụnanya ...
Nature njem na England
Taa, anyị na-agwa gị ka ị chọpụta ebe ọdịnala n'ụzọ ọzọ, ebe ọ bụ na mba a nwere ọmarịcha ihe ịchọ mma mara mma kwadebere ...
Nnukwu egwuregwu na Italytali
Ọ bụrụ na ị hụrụ onye adrenaline n’anya, ị ga-ahụ ebe zuru oke n’obodo a. Ọ na-enye ọtụtụ ohere ịme ...
Ozi banyere Rome
Rome, isi obodo Italy, bu obodo kacha ochie na Europe ma obi ndi Katoliki dika…
Ista omenala na Ista na Netherlands
Na Holland ọ bụ naanị ezumike na Ista na Sọnde na Mọnde, ha enweghịkwa akara okpukpe mara ama. Umuaka nwere obi uto na "akwa ichu nta".
Ihe ị ga-ahụ na Syntagma Square, na Atens
Ọ bụrụ na ịga Atens, gbaa mbọ were nkeji ise gagharịa na Syntagma Square ma nwee ekele maka gburugburu ya,
Zọ kacha mma mara mma na Gris
A njem Greece ga-atọ ụtọ nke niile hiking enthusiasts. Okirikiri ala, obere ụzọ ụkwụ okwute ...
Ihe ebube nke England
Echere na otu n'ime mba kachasị ukwuu na United Kingdom, England nwere ọtụtụ ebe ndị njem nleta na ...
Lee Switzerland n'ime ụbọchị atọ
Iji gaa Switzerland na ụbọchị atọ, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịga obodo Geneva, ebe ...
A njegharị nke njem nleta ebe nke England
Ga mba ọzọ na-abụghị nke anyị nwere ike ịdị mgbagwoju-anya, enwere ọtụtụ ihe mgbochi anyị ga-emerịrị, site na ...
Bogbọ mmiri ụlọ Amsterdam, ụzọ ọzọ nke ibi n'ime obodo
N'ime ọwa mmiri 165 nke Amsterdam, e nwere ụgbọ mmiri ụlọ 2.500 nke na-echekwa ezinụlọ, ndị di na nwunye, ndị enyi, họtel na ụlọ mmanya. Akwụsịla ileta ha.
Ndepụta saịtị njem nleta na Ireland
Na-erite uru na Wednesde na-anaghị akwụ ụgwọ iji gaa kacha mma nke Ireland
Ireland, elu mmiri nudist
Ga-esi mara ndị kasị mma ịgba ọtọ osimiri na Ireland
Offọdụ n'ime osimiri ịgba ọtọ kacha mma na Australia
Osimiri kachasị mma na oke mmiri na Australia
City Tour na akụkọ ihe mere eme trams nke Milan
Akụkọ ihe mere eme nke Milan
Nnukwu ụlọ nke Vilafamés, nke sitere na Arab, dị n'elu obodo ochie ahụ, mana anyị na-emesi gị obi ike na echiche na nrịgo dị mfe ọ bara uru.
Basilica ochie na amamiihe nke Saint Constance
Basilica nke Saint Constance bụ otu n’ime ụlọ ụka kacha ochie na Rome
Philippine Trenchi, otu n’ime ime mmiri kacha njọ n’ụwa
Philippine Trenchi bu otu n’ime ala di omimi n’uwa.
Ọzara Lemnos, nke pụrụ iche na Gris
Osimiri Lemnos nwere ike ịbụ naanị ọzara na Gris na Europe
Caribbean: Nnukwu Antilles ma ọ bụ Antilles Nta
Ndị Caribbean na-enye ndị njem nleta dị iche iche. Sonyere anyị ka ị mara ma ebe ị gara iji aga njem n’rukwu Antilles ka ọ bụ obere Antilles.
Atens, ọdịnala, ụzọ ndụ na omenala
A maara ndị bi na mpaghara ahụ site n'àgwà dị ka mmetụta na ụjọ, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ nke ibu ọrụ, ha nwere ike igosi ndidi ma dozie esemokwu ọ bụla. Obi abụọ adịghị ya na Atens nwere ọdịbendị nke ya na ọkwa nkwukọrịta.
Keslọ ihe nkiri Shakespearean
London bụ ụlọ ihe nkiri mbụ nke onye edemede Bekee a ma ama pụtara, The Shakespeare's Globe Theater ma ọ bụ Shalọ ihe nkiri Shakespearean.
Anyị na-enyocha ihe nzuzo nke egwu ọdịnala ndị Venezuela na ngwá ọrụ ndị Venezuela kachasị mma. AH MR NOT MB MA abụ nke Venezuela.
Ọ bụ ụlọ nsọ Buddha Buddha na Amsterdam
He Hua Temple bụ ụlọ nsọ Buddha Buddhist kasị ukwuu na ụdị Chinese. Ọ dị na mpaghara Asia nke Amsterdam.
Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Warao, agbụrụ amaala nke Venezuela nwere ezigbo nri, ọrụ aka, agụmakwụkwọ, njem na ụlọ
Osimiri mara mma kachasị mma na Atens
Osimiri niile dị nso Atens na-ewu ewu n’oge ọnwa na-amalite site na Mee ruo July.
Ihe 5 mara mma gbasara Manila
Ihe 5 na-adọrọ mmasị banyere Manila icheta
Bachelor Party na Caribbean
The bachelor ọzọ bụ otu oge na ndụ. Ndị Caribbean na-enye ụzọ ndị magburu onwe ha iji mee ya.
Sierras de Córdoba: gbagoo na Corralejos Osimiri Waterfalls
Taa, anyị malitere ịgagharị na Corralejos River Waterfalls na Calamuchita.
Museumlọ ihe ngosi nka dinosaur kacha mma nke America
Ọzọ anyị ga-achọ ikwu maka ụlọ ngosi ihe ngosi nka kachasị mma na dinosaur na United States, dị ka otu ụzọ ọzọ maka ntụrụndụ
Ihe ncheta ndị dị mkpa na England
Oge a anyị chọrọ ịgwa gị gbasara ụfọdụ ihe ncheta kachasị mkpa na England, bido na Westminster Abbey.
Othlọ ntu ekwentị na England
Bolọ ntu ekwentị na England bụ ihe ọzọ na ọtụtụ atụmatụ dị iche iche na ihe dị iche iche na-eme ka obodo a bụrụ nke pụrụ iche ọkachasị obodo London.
Ọrụ Michelangelo na Rome
Ọrụ nke Michelangelo ị nwere ike ịchọta na Rome
Venice nwere nsogbu na ndị njem
Venice nwere nnukwu nsogbu na ndị njem
Gịnị bụ oge kacha mma iji gaa Switzerland?
Oge kacha mma iji gaa Switzerland dabere nke ukwuu na ihe ịchọrọ ịme ozugbo ị nọ mba ahụ.
5 aquariums kacha mma na United States
United States bụ mba na-enye ọtụtụ ihe nkiri maka ezinụlọ dum, yana aquariums bụ ụfọdụ n'ime ebe nkiri kachasị ewu ewu.
Ndị nche eze na obí eze London
Ndị nche eze bụcha akụkụ nke Ngalaba Ezinaụlọ, ndị na-echekwa obí eze kemgbe 1660
The Caem Canem Mozis na Pompeii
Cave Canem bụ nnukwu osisi a ma ama site na mkpọmkpọ ebe nke Pompeii
Ahụkarị nri Dutch na azụ na azụ
Na nri Dutch na nke nwere njikọ chiri anya karịa nke nwere azụ na azụ azụ, haring bụ otu n'ime isi na ọtụtụ ụdị nri.
Geography nke Philippines: eziokwu dị mma
Eziokwu na-akpali mmasị banyere ọdịdị ala nke Philippines.
Oghere Ọghọm nke Templelọ Todaiji
Lọ Todaiji dị na Nara nwere oghere ama ama nke na-ekwe nkwa nghọta nye onye ọ bụla jisiri ike gafee ya. Lee, anyị na-agwa gị karịa.
Ihe ncheta sitere n'Ijipt
Onweghị ihe dịka ileta ahịa dị na mpaghara iji zute ndị obodo. Ma nke kachasị mma bụ ihe ncheta si n’Ijipt ị nwere ike ịzụta.
Costa Smeralda, nke kacha mma Sardinia
Emerald Coast bụ otu n’ime oke osimiri kachasị mma na Sardinia
Ihe nzuzo ahụ, Anne Frank House
Ihe nzuzo nzuzo ahụ, na Prinsengracht 267, bụ ụlọ a kacha eleta na Amsterdam, ọ bụ ụlọ ebe Anne Frank bi na n'ime ya ọ dere ọtụtụ akụkụ nke akwụkwọ edetu ya.
Ebe ịga leta England
E nwere ọtụtụ ebe ị ga-eleta na England dịka Devon na Cornwall nke a ma ama site na ịbụ obodo Bekee ọdịnala ebe ị nwere ike ị drinkụ tii ma soro ndị enyi kerịta.
Cablọ Nzuzo Nzuzo, Pompeii eroticism
Inetlọ Ọrụ Nzuzo ahụ nwere nchịkọta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ site na mkpọmkpọ ebe nke Pompeii
Volainbus, si na Florence pụọ ọdụ ụgbọ elu
Volainbus bụ bọs nke jikọtara etiti Florence na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Florence
Ihe ncheta kacha mma Santorini
Ndepụta ihe ncheta kacha mma Santorini
Milan bụ obodo nwere ọtụtụ agbata obi, ụfọdụ na-adọrọ adọrọ karị, ndị ọzọ dị mfe ma nwekwuo ike.
Ebe nkiri ndị njem nlegharị anya na Rome
Obodo nke Rome naanị na-enye gị ọtụtụ ebe dị mma ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ma mụta banyere akụkọ ihe mere eme, ọdịnala na ọdịnala oge ochie
Ọgbakọ kacha mma na Santorini
Ebe ịga leta na Piraeus
Na Piraeus, ọdụ ụgbọ mmiri Atens, e nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ebe kwesịrị ka a gụọ, gụnyere ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie na ebe a na-ere nri.
Chọọchị nke Domine Quo Vadis, n'okporo ụzọ Appian
Churchka nke Domine Quo Vadis bụ ụka mgbe ochie dị na Appian Way ebe ekwuru na Peter hụrụ Jizọs
Santa Marinella, osimiri gbara Rome gburugburu
70 kilomita n'ebe ugwu Rome bụ Santa Marinella, ebe mara mma maka ndị Rom
Soro ụzọ nke Tunnels 52
The Nsoro nke 52 Tunnels bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma mara mma njem nlegharị ụzọ gasị na Italy
Catacombs nke Saint Peter na Marcellin
Catacombs nke Saint Peter na Marcellin bụ, ya na 18.000 square mita, nke atọ kasị ukwuu na Rome
Freemasonry na-aga Rome
Otu n'ime ọtụtụ ụzọ gasị enwere ike ịme na Rome bụ Route of Masonry, na-agafe ụfọdụ akụkụ Freemasonic nke obodo ahụ
Obí Farnese dị na Caprarola
85 kilomita n'ebe ugwu Rome bụ obodo Caprarola, nke kachasị mma bụ Farnese Palace
Otu esi aga Rome na Tivoli
N’isiokwu a anyị kọwara etu ị ga-esi jiri ụgbọ ala, bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko rute Tivoli site na Rome
Ebe ị mara ụlọikwuu na Ireland
Ọ bụrụ na-amasị gị ọtụtụ ịga ebe ha mara ụlọikwuu, ịga ebe ha mara ụlọikwuu dị ka ụfọdụ na-ekwu, mgbe ahụ ana m agwa gị na ị nwere ike ịga ebe obibi ...
Ihe ị ga-eyi na Paris n’oge oyi
Paris bụ obodo na-eme onwe ya ka amara ya n'oge ọ bụla, ọbụlagodi n'oge oyi, ọ bụ ezie na n'oge a ị ga-eyi uwe na-ekpo ọkụ.
Atọ ahịa ochie atọ na Vienna
Gagharịa na ahịa ochie nke Vienna
Monastiraki Sọnde Market na Atens
Na mpaghara Monastiraki a na-eme ahịa ọ bụla na Sọnde ọ bụla, na-atụ aro maka ịzụrụ njem ọdịnala.
Mpaghara Chinatown na Milan
Gburugburu Via Paolo Sarpi bụ mpaghara Chinatown, nke dị mma maka ịzụ ahịa ma ọ bụ iri nri
Tydị ebe obibi na Venezuela
E nwere dị iche iche nke ebe obibi na Venezuela, si okomoko hotels na isi hammoku pitches….
Ememe ezumike na Switzerland n'oge opupu ihe ubi
Ka ọ na-erule March 20, oge opupu ihe ubi nke Europe na-amalite. Maka ọtụtụ oge kachasị mma ịhazi ...
10 obodo kacha mma ibi na Netherlands
Kwa afọ magazine Elsevier na-ewepụta ndepụta nke ebe 50 kachasị mma ibi na Netherlands dabere na ...
Saintbọchị Saint Patrick na Canada
A na-eme ụbọchị St. Patrick kwa afọ na Machị 17. Ma ọ bụ ezie na ọ bụghị eziokwu ...
Osimiri Naịl: Cairo ruo Luxor
E nwere ụzọ ama ama maka ịgagharị na Naịl.Ọ sitere na Cairo ruo Luxor nke laghachiri na ...
Ili Santa Lucia, na Chọọchị San Geremia
Churchka San Geremia na ili Saint Lucia, na Venice
Ihe ị ga-eme na Biarritz na oge opupu ihe ubi
Ruo mgbe Agha Secondwa nke Abụọ, Biarritz bụ Monte Carlo nke Atlantic Coast, nke Napoleon III gbanwere ka ...
Canada, mba ị ga-eleta na mmiri
Canada dị na ugwu ugwu, yabụ opupu mmiri na-amalite site na Machị ruo June, ebe ...
Osimiri Paradaịs nke agwaetiti Margarita
N'ebe ugwu nke ụsọ oké osimiri nke Venezuela, Isla de Margarita, bụ obere agwaetiti ugwu ugwu na-ewu ewu ...
Ihe mere ihunanya iji gaa Niagara Falls
Ike na ịma mma Niagara Falls na-eme ka ọ bụrụ ihe nkiri na-adọrọ adọrọ nke na-adọta…
Osimiri n'akụkụ Maracaibo
Obodo Maracaibo, nke di n'etiti nkpuru koko ahihia nke Venezuela, bu isi ...
Ezigbo ezumike na Isla Margarita
Agwaetiti Margarita bụ agwaetiti dị na Oke Osimiri Caribbean ihe dị ka kilomita iri abụọ na ise n'ebe ugwu nke ala mmiri ...
6 njem nleta ebe ke Sweden kwesịrị ịma
Nkume ndị a tụrụ atụ nke Tanum A na-ahụ ha n'ógbè Bohuslän. Ebe a bụ otu n'ime saịtị 12 nke ...
Omenala ndi Quebec
Nri nke ógbè Quebec bụ nri nke France na Ireland na-emetụta mmetụta dị ukwuu nke ebe ọ bụ na ...
Ọmarịcha ọdọ mmiri ndị mara mma na Peru
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ọdọ mmiri mara mma na Peru n'oge oge ọkọchị, ị ga - ewere ụfọdụ ...
Osimiri Anzio, ebe alids na Nero jere
Anzio, osimiri dị nso na Rome
Isi ezumike na England na March
England na-agba ụbọchị pụrụ iche kwa ọnwa metụtara akụkọ ntolite ya na ọdịnala dị iche iche ...
Ntụrụndụ ndị okenye na Amsterdam: Ogwe banana
Banana Bar, a na-akpọ Bananenbar na Dutch, bụ otu n'ime klọb mmekọahụ kachasị ewu ewu na Mpaghara Red Light ...
Mmiri kacha mma na Miami
A maara Miami n'ụwa niile maka ịbụ isi obodo mba ụwa maka mmiri ebe ọ nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu ...
Gaa France na oyi
Winter bụ dịghị ihe ọzọ na-ewu ewu oge maka njem nleta na France, ma e nwere ọtụtụ ihe magburu onwe ya ileta. Ihe…
Ihe ị ga-eme ma lee na Saratov
Saratov bụ obodo dị mkpa dị n'akụkụ Osimiri Volga, ihe dịka 858 kilomita na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Moscow, nke nwere ...
Icelọ Obí nke Quebec
Ruo na February 16, 2014, Québec na-eme emume Carnival a ma ama, nke mebere ya ...
Portugal, ala carnivals
Oge mmemme Carnival na Portugal bụ oge ọ aụ na oge na-atọ ọchị nke na-amalite na February. Ọ bụ nnọkọ…
Gris na February, ememme na ememme
Ihe ị ga-eme na February na Gris
Valentbọchị Valentine na Switzerland, karịa okooko osisi na chọkọletị
Valentbọchị Valentine bụ otu n'ime ememme kachasị eme n'ụwa. Ọbụna na Switzerland, ndị ...
Ọdụ ụgbọ elu Mayakovskaya nke Moscow mara mma
Mayakovskaya bụ ọdụ nke Metro Metro na akara Zamoskvoretskaya. Echere na otu n'ime ihe kachasị mma ...
Choputa Osimiri National Park nke Joshua Tree
Na mba buru ibu ma di iche iche dika United States of America, ichota ihe obula….
Naịl, ọzara nke ọzara
Otu n'ime ndagwurugwu kachasị mma n'ụwa bụ Osimiri Naịl mara mma, nke akụkụ ya ...
Umbria, otu n'ime mmanya kacha mma ebe 2014
Edere mmanya nke Umbrian dị ka ndị kachasị mma n'ụwa.
Osimiri Egypt kachasị amasị ya
Ọtụtụ mba ndị dị na North Africa na-enwe ọnọdụ dị mma n'oké osimiri. Visitorsfọdụ ndị ọbịa na-aga Morocco, ...
Obodo ochie nke France: Agen
Agen bụ Commune na ngalaba Lot-et-Garonne, na mpaghara Aquitaine, na ndịda France, ...
Adventure biking si San Francisco na Los Angeles
Zọ a na-agaghị echefu echefu iji chọpụta California bụ site na ịnyịnya ígwè n'etiti oke osisi dị ebube, ubi vaịn na ugwu na ...
Gbọ mmiri paireti na-agba ịnyịnya na Miami
Miami, obodo nke osimiri mara mma, ụlọ oriri na ọ upsụ upsụ dị elu, ụlọ oriri na ọ luxuryụ luxuryụ mara mma, klọb abụọ dị egwu na ebe ndị ama ama, ...
Ebe kacha mma maka anụ ọhịa bea na-ekiri na Canada
Enwere ụdị bea 8 dị na kọntinent nke North America, South America, ...
Pyramid ndị kasị buo ibu n’Ijipt
Ndị ama ama n'ụwa niile, pyramid nke Egypt bụ isi ihe na-adọrọ mmasị ndị njem na-adọta ọtụtụ iri puku mmadụ ...
Coral na-acha uhie uhie, ihe ncheta nke Sardinia
Coral na-acha uhie uhie, ihe ncheta kpochapụwo site na Sardinia
Ebe kachasị mma ileta na Holland
N'oge gara aga, Netherlands bụ ike nke ndị agha mmiri ugbu a ọ bụ otu n'ime mba ndị mmadụ jikọtara ọnụ ...
Nchefu echefughi rue Osimiri Lena na Siberia
Nnukwu ókèala dị na Siberia na-esite na ala Arctic nke North Pole ruo ...
Onyinye kachasị cheesi na Sweden
Na-eche echiche nke a nleta Sweden? Ka obu na ibi na Sweden ma choo ihe iziga ulo ...
Eziokwu na-akpali mmasị banyere Golden Gate Bridge
Ọ bụ mma nke n'ọnụ mmiri nke San Francisco. Ọ bụghị n'efu na 1999 ndị American Institute of Architects nyere ya ...